Raketo ny fangatahana ny sidina fiaramanidina manokana hanohizana aorian'ny COVID
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Raketo ny fangatahana ny sidina fiaramanidina manokana hanohizana aorian'ny COVID
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao lafo vidy • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
69% amin'ireo mpampiasa fiaramanidina manokana ankehitriny no manantena ny hanidina post-COVID betsaka kokoa noho ny talohan'ny areti-mandringana.
Ny antsasaky ny mpampiasa fiaramanidina tsy miankina ankehitriny dia nilaza fa nanomboka nanangana fiaramanidina manokana noho ny COVID-19 izy ireo.
Mpampiasa 54% no nilaza fa mampiasa fiaramanidina manokana ho an'ny dia manokana / fialan-tsasatra fotsiny.
Ireo mpampiasa vaovao dia mety hampiasa fiaramanidina manokana ho an'ny dia manokana / fitsangatsanganana (64%).
Ny fanadihadiana vao navoaka dia mampiseho fa hitombo ny fangatahana fiaramanidina manokana ho an'ny ho avy.
Manodidina ny 69% amin'ireo mpampiasa fiaramanidina tsy miankina ankehitriny no manantena ny hanidina bebe kokoa aorian'ny COVID mihoatra ny talohan'ny areti-mandringana, ary ny 28% milaza fa manantena ny hisidina manokana amin'ny ambaratonga mitovy izy ireo. 3% ihany no nilaza fa hanao sidina tsy miankina vitsy dia vitsy izy ireo aorian'ny tontolo COVID.
Fampiasana andrasana amin'ny fiaramanidina manokana aorian'ny Post-COVID
Mampiasà fiaramanidina manokana aorian'ny COVID mihoatra ny COVID 69%
Mampiasà fiaramanidina manokana toy ny talohan'ny COVID 28%
Mampiasà fiaramanidina manokana aorian'ny COVID fa tsy COVID 3%
Ny antsasaky ny mpampiasa fiaramanidina tsy miankina ankehitriny dia nilaza fa nanomboka nanangana fiaramanidina manokana izy ireo noho ny Covid-19, ary ny 100% amin'ireo sidina tsy miankina vaovao ireo dia milaza fa mikasa ny hitohy aorian'ny areti-mandringana. Maherin'ny antsasaky ny (53%) no nilaza fa hanidina manokana tsy miankina na dia aorian'ny areti-mandringana aza, fiakarana 29% amin'ny 41% izay nilaza fa hanohy ny sidina manokana amin'ny fanadihadiana amin'ny volana Janoary.
Ny fanadihadiana dia nanambara ihany koa ny fantsom-pifandraisana mahery vaika mety ho mpanjifa jet tsy miankina vaovao. Amin'ireo valinteny maherin'ny 225, 90% no sidina manokana, ary 9% no nilaza fa mandinika fiaramanidina manokana.
Raha ny karazan-dia dia 54% no nilaza fa mampiasa fiaramanidina manokana ho an'ny dia manokana / fialan-tsasatra fotsiny, 43% no mampiasa izany ho fampifangaroana sidina manokana / fialan-tsasatra sy filan'ny orinasa ary 3% no nilaza fa mampiasa sidina manokana ho an'ny orinasa.